Crosby သည် Mini ကို Forge Ratchet အမျိုးအစား Binder Turnbuc Load ...
G450 HDG အမေရိကန်အမျိုးအစား Drop Forge ရဲ့ကြေးနန်းကြိုး Clamp
M 16 C15 သွပ်ပန်းကန် CR3 DIN582 မျက်လုံးအခွံမာသီးရုပ်သိမ်းအတု
hot Dip G403 မေးရိုးအဆုံးဆုံလည်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
အလွိုင်းသံမဏိနီ Drop Forge ရဲ့မျက်လုံးတငျမွှောကျ Liftin ခြယ်သ ...
သံမဏိရှည် D ကိုခြေချင်း Long ကအမျိုးအစား
အဆိုပါသံမဏိရှည် D ကိုခြေချင်း Long ကအမျိုးအစားများစွာ 1. ဖျေါပွခကျြ
ပစ္စည်း: သံမဏိ, SS304 သို့မဟုတ် SS316
အဆိုပါသံမဏိရှည် D ကိုခြေချင်း Long ကအမျိုးအစား2ကုန်ပစ္စည်း Specification
item: သံမဏိရှည် D ကိုခြေချင်း Long ကအမျိုးအစား
အမျိုးအစား: Long ကအမျိုးအစား
Size:4mm ကနေ 12mm မှ
ထုပ်ပိုး: PP အိတ် + စက္ဏူထူ + pallet, ဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည်အဆိုအရ ''
ဝန်ဆိပ်ကမ်းကို: တရုတ်နိုင်ငံတွင် Qingdao ဆိပ်ကမ်းကိုသို့မဟုတ်အခြားဆိပ်ကမ်းများ
ကျနော်တို့ 20 ခန့်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတစ်ကြောကျဆူးကွင်းဆက်စက်ရုံအဖြစ်စတင်တဖြည်းဖြည်းအဏ္ဏဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအတွက်ကြီးမားတဲ့ထုတ်လုပ်သူသို့တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ဒေသများရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များအနေဖြင့်ကြီးထွားလာနေသောတောင်းဆိုမှုများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်ချိန်တည်းမှာကျနော်တို့ကတခြားစက်ရုံတွေနဲ့အတူအစိုင်အခဲမိတ်ဖက်တက် setting များက Hardware နဲ့စွဲစေနှင့်အခြားဆက်စပ်ဟာ့ဒ်ဝဲအကြံအဖန်ကြှနျတျောတို့၏နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်။
ယခုငါတို့ RUI DE TAI တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအတွင်းချည်နှောင် & မသမာမှုများနှငဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်တစ်ဦးထိပ်တန်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီပြောဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ Jimo, Qingdao စီးတီး, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်မှာတည်ရှိပါတယ်။
အဖြစ်ဟာ့ဒ်ဝဲ, စွဲစေနှင့်ဆက်စပ်ဟာ့ဒ်ဝဲအကြံအဖန်အဏ္ဏဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, သံကြိုး, အမျိုးမျိုးတို့ကိုထောက်ပံ့အထက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့။
မိတ်ဖက်စက်ရုံများ, ကြှနျုပျတို့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအကဲဖြတ်ဖို့ရညျအသှေးစံချိန်စံညွှန်းများပြည့်စုံသောစနစ်အားအသုံးပြုပါ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် QC အဖွဲ့ကဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်စစ်ဆေးမှုများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ပို့ဆောင်မှုမပြုမီထုတ်ကုန်စစ်ဆေးမှုများပြီးစီးပါလိမ့်မယ်။
5. သင်အဘယ်ကြောင့်အခြားစက်ရုံများထက် ပို. ယုံကြည်စိတ်ချရှိပါသလဲ
ကျနော်တို့တုံ့ပြန်ချက်သည်သင်၏မေးခွန်းများကိုချက်ချင်း 24 နာရီတစ်ရက်,7ရက်အတွင်းအပတ်တိုင်း။
ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်တင်ပို့မတိုင်မီကြိုတင် 30% ငွေပေးချေမှု & 70% ကိုလက်ခံ, ဖြစ်စေ T / T သို့မဟုတ် L / C အနေဖြင့်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအေးဂျင့်များနှင့်အတူ, ငါတို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အများဆုံးဆိပ်ကမ်းများမှပေးပို့ထုတ်ကုန်များ၏နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ တစ်အိမ်မှအိမ်တံခါးဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းထောက်ခံသည်။ FOB, C ကို & F ကို, CIF အသုံးအများဆုံးကုန်သွယ်မှုစည်းမျဉ်းများဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူအရောင်းရဆုံးသံမဏိရှည်လျားဃခြေချင်းရှည်လျား type ကိုမဝယ်နဲ့လက္ကားမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ကျနော်တို့အများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ဦးဆောင်မသမာမှုများနှငထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းတဦးပါပဲ။ ကိုအကြှနျုပျတို့မှအခမဲ့နမူနာ get နှင့်ပိုပြီးအချက်အလက်ဘို့ငါတို့စက်ရုံသို့ဆက်သွယ်အခမဲ့ဖြစ်ပေးပါ။
ယခင်: 55T21 / 2US အမျိုးအစား Bolt ကအမျိုးအစား Chain ခြေချင်း G2150
ဝက်အူပင်လေးက S ရုပ်သိမ်းသံမဏိအမေရိကန်အမျိုးအစား ...
Pin နှင့်အတူ 1/2 က S-247 ကိုနှစ်ချက် Clevis Link ကိုခြေချင်း
သံမဏိအဏ္ဏဝါဆုံလည် Snap ခြေချင်းကျေး ...
M6 အီးနှင့်အတူ Forge DIN1480 Turnbuckles အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး ...
3/8 အမေရိကန်အမျိုးအစားပျော့ကြေးနန်းကြိုး cable အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး ...
အလွိုင်းသံမဏိနီ Drop Forge ရဲ့မျက်လုံးတငျမွှောကျ L ကိုခြယ်သ ...
သံမဏိ Thim ၏စျေးနှုန်းကဘာလဲ ...
အဆိုပါ PR များအသုံးပြုမှုအတွက်မသမာမှုများနှငခြေချင်း ...